တံဆိပ်အထည်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ | တရုတ်တံဆိပ်ထည်စက်ရုံ
Dip-Coated နိုင်လွန် Taffeta
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် Dip-Coated နိုင်လွန် Taffeta 1. ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်
၁။ Care Label Printing အတွက်။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်
OEKO နိုင်လွန် Taffeta ကိုစုစည်းခဲ့သည်
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် OEKO နိုင်လွန် Taffeta 1. ကိုစုစည်းခဲ့သည်။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်
ထူထပ်သော Coated နိုင်လွန် Taffeta
Care Label Printing အတွက်အထူထူသည့်နိုင်လွန် Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အသုံးမဝင်နိုင်သောနိုင်လွန် Taffeta 1. ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်
Care Label Printing အတွက်အပူလွှဲပြောင်းနိုင်လွန် Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ် Printing.2 သည်ဆန့်ကျင်သောဖြတ်တောက်ခြင်းနိုင်လွန် Taffeta ၁ ။ သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer.3 ။ OEKO certificate.4 ။ GRS လက်မှတ်။
non-yellowish နိုင်လွန် Taffeta
Care Label Printing အတွက်အဝါမရှိသည့်နိုင်လွန် Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Non-Fluorescence နိုင်လွန် Taffeta
Care Label Printing အတွက် Non-Fluorescence Nylon Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
နိုင်လွန် Taffeta ပြန်လည်အသုံးပြု
Care Label Printing ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်နိုင်လွန် Taffeta ၁ ကိုပြန်လည်အသုံးပြုပါ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Flame Anti-Nylon Taffeta
Care Label Printing အတွက်မီးလျှံဆန့်ကျင်သော Nylon Taffeta ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
ပုံမှန်အလျားလိုက်အပေါက် Edge Polyester ဖဲ
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်သည်ပုံမှန်အလျားလိုက်အပေါက် Polyester ဖဲ 1. ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။